एसिड-महिलाहिंसाको हतियार बन्दै ! - thenepalsuchana
सम्झना पौडेल, पछिल्लो समय काठमाडौँमा एसिड आक्रमणका घटना एकपछि अर्को गरी दाहोरिदै गएका छन् । प्राय यस्ता घटनामा महिला मात्रै निशानामा पर्दै आएका छन् । गएको बिहिबार राति देशको राजधानिले चिनिएको काठमाडौँको सितापाइलामा एसिड आक्रमण भयो ।
निशानामा परिन ओखलढुंगाकी २२ वर्षीया महिला । उनको दायाँ भागको कपाल, गाला र घाँटीको केही भागमा एसिड परेको छ । घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा रौतहटको लक्ष्मीपुर घर भइ हाल डल्लु बस्ने मोहम्मद आलम र भारत घर भई डल्लुमा कालीगढको काम गर्ने मुन्ना मोहम्मद पक्राउ परेका छन् । उनीहरुमाथि प्रहरीले कानुनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
अब यस्ले बताउन्छ देशको राजधानि कति असुरक्षित छ भनेर ? राजधानि काठमाडौँमा मात्र पछिल्लो एक वर्षको शृङ्खलाबद्ध एसिड आक्रमणको घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने कहालिलाग्दो छ । नेपालको सन्दर्भमा दाइजो, एकतर्फी प्रेम, इगो, बदलाभाव आदिलाई यसको कारणबाट नै यस्तो अपराधका घटनाहरु घटने गरेको प्रहरीहरुको भनाई छ ।
प्रहरीको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पछिल्लो १ बर्षमा मात्र ६ वटा एसिड आक्रमणका घटना भएका छन् । जेठ १ गते बुधबार राति, काठमाडौंको कालोपुलमा २२ बर्षीया जोनी खड्कामाथि आफ्नै श्रीमानले एसिड आक्रमण गरे । २०७५ पुस १८ गते, पोखरा महानगरपालिका २९ आदर्शनगरका ४७ बर्षीय वीरेन गुरुङले आफ्नै श्रीमतीलाई एसिड आक्रमण गरे ।
२०७५ असोज ८ गते राति, पूर्वी नवलपरासीको कावासोतीमा २० बर्षीया बसन्ती परियार एसिड आझमणमा परिन । २०७५ असोज ३ गते अछामको तुर्माखाद गाउँपालिकामा ६ महिनाका एक बालक एसिड आक्रमणमा परे । २०७५ भदौ २६ गते, रौतहट चन्द्रपुरका सुतिरहेको अवस्थामा एकसाथ दुई दिदीबहिनी एसिड आक्रमणमा परे । २०७५ बैशाख १० गते, चितवनमा कल्पना श्रेष्ठ एसिड आक्रमण मा परिन भने १० फागुन २०७१ मा काठमाडौंको बसन्तपुरमा २ किशोरी एसिड आक्रमणमा परे ।
यी र यस्ता घटनासँगै अब आम महिलाको सुरक्षाको ग्यारेन्टी कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । अपराधका यस्ता घटनाबाट पीडितहरुले जीवनभर पीडा मात्र भोरेर पुग्दैन उनिहरुलाइ त समाजले तिरस्कार र हेला समेत गर्ने गरेका छन् ।
अहिलेसम्म भएका एसिड आक्रमणका घटनालाई हेर्दा यस्ता आक्रमणबाट महिलाहरु कुरुप, अन्धो र अपांग बन्न बाध्य भएका छन् । युवतिहरु एकपछि अर्को हिंसामा पर्दै आउनुले अझै पनि यो देशमा महिलाहरु प्रति हुने हिंसाको ज्वरो ब्यूउँतै छ यसलाई जरैबाट निमिट्यान्न पार्न नसकेसम्म यस्ता प्रकारका आपराधिक कृयाकलाप नरोकिने देखिन्छ ।
यस्ता घटनाबाट पीडित महिलाले सहन नसकेर आत्महत्या सम्म गर्ने गरेका छन् । एसिड आक्रमण महिलाहरुमाथि हुने हिंसाका विभिन्न स्वरुपहरु मध्ये एक हो । माथिका घटनाहरुको विवरणबाट के देखिन्छ भने एसिड पनि महिला हिंसाको लागी हतियार नै बनेको छ । तसर्थ एसिडको बिक्री वितरणमा कडिकडाउ गर्नुपर्ने देखिन्छ । २०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहिताको दफा १९३(२) मा , कसुर गर्ने व्यक्तिलाई कसुरको प्रकृति हेरी अनुहार कुरुप पारेमा पाँच वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था रहेको छ तर के यतिले मात्र सजाय पर्याप्त होला त ?
तसर्थ यस्तो अपराधमा संलग्नलाई कडाभन्दा कडा कारबाहीको व्यवस्था गर्नु जरुरी देखिन्छ । जबसम्म अपराधिक मानसिकतामा कमि आउदैन । अन्याय र कुर्कमको पश्चताप तबसम्म हट्दैन । तर यस्को लागि आन्दोलन र नाराबाजी मात्र उपाय हो त ? हैन पक्कै पनि हैन, महिलाहरु पाि पुरुष सरह खुल्ला पंक्षि झै हिड्न पाउनुपर्छ । नेपाल जस्तो मुलुकमा फाँसि हो वयवस्था नहोला । फाँसिले मात्र सबै अपराध रोकिन्छ भन्ने पनि होइन किनकि फाँसी हुदैमा घटना रोकिने हो भने साउदी अरेबिया, मलेसियामा पनि त फाँसीको सजाय छ तर खोइ रोकिएको ?
तसर्थ यस्ता अपराधिलाई कडा काहबाही गर्नुपर्छ । तसर्थ यो बिषयमा गम्भिर बहस हुन जरुरी छ । अब पनि सरकार चुप बस्ने हो भने यो अराजक स्थितिले ठुलै रुप लिनसक्छ । यस्ता घटनाको बिरुद्धमा सबैतिरबाट सशक्त आवाज उठाउनु आवश्यक छ ।
अब यस्ता अपराधिलाइृ जीवनभर जेलभित्र सडाएर राख्नुपर्छ हैन भने एसिड आक्रमण गर्नेको सरीरभरी एसिड छरेर युवतिलाई भएको पीडाकोबोध गराउनु पर्छ । यसले विकराल रुप लिनुअघि सम्बन्धित पक्षले यसको रोकथाम र नियन्त्रणका उपायहरु नयाँ ढंगले विकास गरिसक्नुपर्छ । होइन भने प्रहरी निकायको काम अपराध नियन्त्रण होइन, अपराधलाई पछ्याउने मात्र हुुने देखिन्छ ।
१३ वैशाख २०७८, सोमवार १५:२४ बजे प्रकाशित